Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : /bins/ohabolana/lavo
Proverbe Aza homehy lavo, fa ny tody tsy misy, fa ny atao no miverina. [Houlder 1895 #1718, Veyrières 1913 #2690, Cousins 1885 #387]
Proverbe Boka lavo amin-antsoro : raha misy fivoy, dia lakana. [Veyrières 1913 #1948, Cousins 1885 #775]
Boka lavo an-tsihivitrana : ka nambakain' ny hohony. [Veyrières 1913 #1952, Cousins 1885]
Proverbe Boka lavo an-tsihivitrana : indray mitsinkasina ihany. [Veyrières 1913 #1951, Cousins 1885]
Proverbe Diamangan-dRainisima : ny lavo mitsilany, voa vao manala vava. [Veyrières 1913 #6497, Cousins 1885 #832]
Proverbe Izaho no lavo, niherika anao! [Houlder 1895 #140, Veyrières 1913 #3010, Cousins 1885 #1164, Rinara 1974]
Proverbe Manao tolon’ Ilaihavia : ny anilany tsy lavo, ny anilany tehafi-maso. [Cousins 1885 #1559, Veyrières 1913]
Proverbe Ny an-tratra tsy lavo, ka " alao koa rain' ialahy be " . [Veyrières 1913 #6371, Cousins 1885 #2174]
Proverbe Ny hazo no lavo, ny zaram-pamaky no mody an-daniny. [Veyrières 1913 #1117, Cousins 1885 #2259]
Proverbe Solafaka aman-tsira, lavo amin-tantely : ny mamy roa ho anao daholo ? [Cousins 1885 #2928]
Proverbe Tsy manaja hita ka lava hahoriana. [Veyrières 1913 #4092, Rinara 1974 #4523, Cousins 1885 #3373]